Rajada Arsenal ee Europe League oo Cariiri Gashay Kadib Bar barihii Athletico Madrid+SAWIRRO – Gool FM
CR Shariif April 27, 2018
( Europe League ) 27 April 2018. Kooxda Arsenal ayaa awoodi weysay iney dhafaan 10 cayaartooy oo naadiga Athletico Madrid ah kadib ciyaartii lugta kowaad ee afar dhamaadka Europe League oo bar baro 1-1 ah ku dhamaatay.
Qeybta hore ayaa lagu kala maray 0-0 waxaana fursadii ugu fiicneed ay soo martay kooxda Arsenal kadib kubad uu birta goolka ku garaacay Lacazette.
Daqiiqadii hore waxaa labo jaale lasiiyay daafaca Sime Vrsaljko oo ciyaarta laga saaray iyo sido kale macalinka kooxda Athletico Madrid oo isna loo diray tarebuunka.
Markii dib la isugu soo laabtay kaambiyaha dambe naadiga gunners ayaa hogaanka ciyaarta qabatay waxaan goolka u gaaray Alexandre Lacazette kadib markii uu madax ku dhameystiray karoos ka timid Jack Wilshere.
Laakiin sideed daqiiqo markii ay ciyaartu ka dhineed Athletico ayaa la timid goolka bar baraha waxaan u dhaliyay laacibka Griezmann kadib kubad uu qalday daafac Arsenal ee Laurent Koscielny.
Bar baraha ciyaartu ay ku dhamaatay ayaa u wanaagsaneen naadiga Arsenal oo Asbuuca dambe booqan doonta Madrid lugta labaad ee Europe League.
Mourinho oo beeniyay inuu ku lug lahaa in Salah uu ka tago Chelsea